Bafundiswe ngezemvelo eNzuzwenhle | News24
Bafundiswe ngezemvelo eNzuzwenhle
ISITHOMBE: sithunyelweAbafundi basesikoleni iNzuzwenhle ngesikhathi kuzoqwashiswa ngezemvelo.
INHLANGANO engenzi nzuzo i-Eyentuthuko Foundation ivakashele isikole samabanga aphansi iNzuzwenhle Primary e-Azalea ngoLwesibili mhla zingama-21 kuNhlaba (May) nalapho befike baqwashisa khona ngokubaluleka kwemvelo
kanye nokuyigcina inempilo njalo. Le nhlangano yenze lokhu njengengxenye yokugubha usuku lukazwelonke.
UNks Thembisile Khuzwayo we-Eyentuthuko Foundation uthe inhloso yalolu hlelo ukuthi bazoqwashisa ngezemvelo kule ndawo.
“Njengomhlali wala kule ndawo siyazazi izinkinga esibhekena ngazo zezemvelo kanye nokungcola okugcina sekusilimaza thina njengomphakathi. Sibone kukuhle ukuthi uma ngabe singahlanganisa iminyango eyahlukene ukuba ize izochazela abafundi ngezemvelo kungasiza kakhulu ngoba isikhathi esiningi abantwana abayaye balahle udoti noma ikuphi noma ikanjani.
“Nginethemba lokuthi uma ngabe sebefundisekile kuzoba khona
umehluko kanye nasemphakathini,” kubeka yena.
Uqhube wathi njengoba beqale kulesi sikole akusikona ukuthi sebegcinile kodwa nangonyaka ozayo basazoqhubeka bahambele ezinye izikole ezahlukene ukuqwashisa ngokubaluleka kokugcina imvelo ihlanzekile ngaso sonke isikhathi.
“UMnyango wezeMvelo unezinto ezahlukene ezenzekayo unyaka wonke ngako nathi sizoloku sikhona siyingxenye sihambela ozikole ezahlukene.”
UNks Khuzwayo uthe isifiso sabo esikhulu njengenhlangano ukuthi bathuthukise abafundi ngolwazi.
Omunye wabafundi u-Ayanda Mafundla owenza ibanga lika-Grade 7 uthe ujabulile kakhulu ngalolu ngoba ukwazile ukuthi afunde ngokunakekelwa kwemvelo.
UNks Senzi Vilakazi nonguthisha kulesi sikole uveze ukuthi ngenxa yothando lwemvelo kanye
nokutshala, lesi sikole sesize sazivusela ingadi lapho sitshala khona izithelo nokuthi uma ngabe sezivuthiwe bese bayazidayisa.